March 10, 2018 – HORNAFRIC MEDIA
Posted on March 10, 2018 by Queen Kiin
Duqii hore ee magaalada Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed oo xalay hadal u jeedinayay boqolaal Soomaali ah oo ku nool magaalada Gothenburg ee wadanka Sweden ayaa sheegay in shacabka Soomaalidu ay u baahan yihiin madax aan ka dhuuman oo toos ula falgasha. Taabit Cabdi ayaa toosh ku ifiyay in madaxda qaar ay doonayaan ineysan wajihin shacabka iyo waaqica jira intaba taas oo uu sheegay inaan lagu heli karin xasilooni iyo aaminaad shacab. Wuxuu soo qaatay qisooyin…
Qaar ka mid ah dalalka Carabta ayaa doonaya in ay xaliyaan Khilaafka cusub ee soo kala dhex galay dalalka Soomaaliya iyo sidoo kale Imaaraadka Carabta ee ku saabsan Heshiiska dekedda Berbera. Wararka laga helaayo xarunta Jaamacadda carabta ee Magaalada Qaahira ayaa sheegaya in Ururka Jaamacadda Carabta ay waddaan qorshe ku aadan soo Afjaridda Khilaafka cusub ee labada dal soo gala dhex galay. Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya Mudane Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay in mid ka…
Waxaa Maanta dugsiga Gen. Kaahiye lagu qabtay xafladda furitaanka baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Xafladda waxaa joogay Madaxweyne Farmaajo, guddoonka labada aqal ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, Ra’isul wasaare Kheyre iyo qaar ka tirsan golihiisa wasiirrada, wakiillo ka socday dowlad goboleedyada, ergayga Qaramada midoobey ee Soomaaliya, ergeyga midowga Afrika ee Soomaaliya, safiirka Turkiga iyo marti sharaf kale. Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee QM u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating, oo goobta ka hadlay…
DG Somaliland oo ku dhawaaqay in sabab la yaab leh ay ku joojinayso wadahadalkii ay la lahayd Somalia.
DG Somaliland ayaa ku dhawaaqday in ay hakin ku samaysay wadda hadaladii dhex mari lahaa Somaliland iyo Soomaaliya. Wasiirka arimaha dibada Somaliland Sacad Cali Shire oo warbaahinta kula hadlay xarunta golaha wakiilada ayaa sheegay inaanay jirin duruuftii saamaxaysay in dib loo furo wada hadalka. Wasiir Sacad ayaa sheegay inay mudo bil ah dib u dhigeen wada hadalkii ay la yeelan lahaayeen dowladda Soomaaliya. “Wadda hadalada inaynu la galno waa arinkii baarlamaanku ansixiyey ee dawlad ahaan…